Koox Premier League Ah Oo Tababare Jose Mourinho Dalab Ula Tagtay Ka Hor Inta Uuna Qaban Shaqada United Waa Kooxdee
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in dalab ka gudbisay tababaraha kooxda Man United Jose Mourinho ka hor intii uuna qaban shaqada kooxda Man United xagaagii hore.
Yahoo Sport ayaa sheegtay in ay Gunners ay dalab ka gudbisay tababarahan reer Portugal markii laga cayriyay kooxda chelsea sanadkii hore.
Run ahaantii The Specia one ayuu hor yaalay dhowr dalab oo kooxo waaweyn ah xilli United qarka u fuushay in ay lumiso tababarahan maadama ay wakhtigaas ka meer-meeraysay in ay erido tababare Louis van Gaal.
Kooxda Reer France ee Paris St-Germain ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay ku dhowaatay in ay la wareegto Tababare Mourinho laakiin Tabababrahan ayaa doonayay in uu qabto shaqada United.
Everton, Inter Milan, Real Madrid iyo Roma ayaa dhamaatood xiiso waali ah u hayay tababarahan muranka badan dhaliya ee reer Portugal.
Ugu Dambayn Jose ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda Man United 4 cisho kadib markii United eriday tababare Van Gaal.
March 2, 2017, 7:04 pm
Asc dhamaan akhristayaasha qiimaha iyo qadarintaba naga mudanoow kusoo dhawaada wararkii goosgooska ahaa ee wargeysyada dalkaan ingiriisku ay ka qoreen suuqa kala iibsiga maanta oo talaado ah .
Bilo dhawr ah ayaa ina xiga wakhtiga ay furmi doonto daaqada suuqa kala iibsiga ee xagaagu balse kooxaha ayaa haatanba wada hadalo kula jiro xiddigo gaar ah oo ay doonayaan isla markaana doonaya in xili horeba sii dhamaystiraan heshiisyadaas ka hor inta uusan cadaadisku kusii kordhi isla markaana aysan kooxo kale ku cidhidhiin heshiisyadaas .
Wararkeena goosgoska ah saaka waxa ugu waaweyn.
Macallinka kooxda Arsenal ayaa iska diiday dalab uga yimi horyaalka China oo sannadki ku qaadan lahaa mushahar dhan £30m.
Zlatan Ibrahimovic ayaa isu diyaarinaya in uu ka hulelo kooxda Manchester United iyadoona ay jirto in Jose uu aad u danaynayo in uu sii haysto weeraryahankaan.
Kooxaha Liverpool iyo Manchester City ayaa loo sheegay in ay maankooda ka saaraan soo qaadashada Virgil van Dijk.
Kooxda AC Milan ayaa isu diyaarinaysa in ay dalab £27m ah ka gudbiso Cesc Fabregas.
Antonio Conte ayaa doonaya in u ka faa’idaysto mushkilada Leonardo Bonucci ku haysata kooxdiisa Juventus isagoona doonaya in uu xagaaga soo qaato daafacaas.
Goolhaye Gianluigi Donnarumma ayaan wax heshiis ah saxiixi doonin dhawaan isla markaasna ka war sugi doona ilaa inta mulkiyada kooxdan ay la waregi doonaan maalqabeenada Chinese -ka ah.
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa in soo qaadato lamaanaah kooxda Napoli ee Lorenzo Insigne and Faouzi Ghoulam.
Jose Mourinho ayaa il gooni ah ku haya xaalada Cesc Fabregas.